अनुहारको आकार अनुसार यसरी गर्नुहोस् कन्टूरिङ - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
मेकअप गर्दा परफेक्ट लुक पाउनको लागि अनुहारको आकार अनुसार कन्टूर गर्नुपर्छ । सबैको अनुहारको आकार परफेक्ट हुँदैन, तर यदि महिलाले आफ्नो मेकअप स्मार्ट ढङ्गले गर्छिन् भने उनी सजिलै परफेक्ट लुक बनाउन सक्छिन् ।
कन्टूरिङले अनुहारको आकारलाई धेरै सन्तुलनमा राख्न सक्छ र यदि तपाईंको अनुहार मोटो छ भने, यसले तपाईंको अनुहारमा स्लिमिङ प्रभाव दिन सक्छ। कन्टूरिङ गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको सबैभन्दा पहिले आफ्नो अनुहारको आकार र त्यस अनुसार कन्टूर हेर्नु हो।
स्क्वायर अनुहारको आकारमा कन्टूरिङ कसरी गर्ने ?
यदि तपाईंको अनुहारको आकार वर्गाकार छ भने, यसको मतलब तपाईंको निधार र बङ्गाराको कुना धेरै तिखो हुनेछ, तपाईंको अनुहारलाई वर्गाकार आकार दिनेछ। यस्तो अवस्थामा, जब तपाईं कन्टूर गर्दै हुनुहुन्छ, यो तीक्ष्णता अलि कम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यसका लागि अनुहारको छेउमा कन्टूरिङ गर्नुपर्छ ।
यसका लागि, तपाईं मन्दिरबाट सुरु गर्नुहोस् र त्यसपछि गालाको हड्डी र कोणीय जबडामा पनि काम गर्नुहोस्। तपाईं गालाहरूमा कन्टूर गर्न सक्नुहुन्छ, तर यस क्षेत्रमा धेरै हल्का कन्टूरिङ गर्नुहोस्। कन्टूरिङ गर्दा गालाको माथिल्लो भागमा हल्का शेड र तल गाढा शेड प्रयोग गर्नुहोस्।
आयातकार अनुहारको आकारमा कन्टूरिङ कसरी गर्ने ?
यो एउटा अनुहारको आकार हो जुन अलिकति लामो छ। यस्तो अवस्थामा, जब तपाईं अनुहार कन्टूरिङ गर्दै हुनुहुन्छ, तब तपाईंले यो लम्बाइलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ। जब तपाईं यो गर्नुहुन्छ, यसले अनुहारको लम्बाइ कम देखिन्छ। यसका लागि, तपाईंले पहिले कपालको रेखाको साथमा कन्टूर गर्नुपर्छ। त्यसपछि आँखा मुनि र निधारको बीचमा अनुहार हाइलाइट गर्नुहोस्।
गोलो अनुहारमा कन्टूरिङ कसरी गर्ने ?
यदि तपाईंको अनुहार गोलो छ भने तपाईंको गाला अलि भारी हुनेछ। गोलो अनुहारको चौडा भाग गाला हो। यस अवस्थामा, गालाको हड्डीहरू कन्टूर गरेर, तपाईं एक कोणीय लुक पाउनुहुनेछ। कन्टूरिङ गर्दा, आफ्नो छाला टोन भन्दा गाढा छाया छनोट गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो अनुहारका विशेषताहरूलाई कन्टूरिङका साथै उचित हाइलाइटिङमार्फत हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ।
अण्डाकार अनुहारको आकारमा कन्टूरिङ कसरी गर्ने ?
अण्डाकार अनुहारको जबडा गोलाकार भए पनि यो अनुहार अलि लामो हुन्छ। साथै, अण्डाकार अनुहारको आकारमा निधारको क्षेत्र फराकिलो हुन्छ। अण्डाकार अनुहार आकारको विशेषता यो छ कि यो अनुहारको आकार प्राकृतिक रूपमा कन्टोर गरिएको छ र त्यसैले तपाईंले धेरै मिहेनत गर्नुपर्दैन। यद्यपि, तपाईं गालाको हड्डीको मुनि, कानको बीचबाट मुखको कुनासम्म अलिकति गाढा छाया लगाएर लिफ्टको भ्रम सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।